Wararka Maanta: Khamiis, July 11, 2019-Madaxweyne Farmaajo oo ku baaqay in la joojiyo dagaalka Ceel Afweyn
"Madaxweynaha waxa uu ka tiiraanyeysan yahay shaqaaqada iyo colaadda dadka walaalaha ah ee ka socota deegaanka Ceel-Afwen ee Gobolka Sanaag, taas oo sababtay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh." ayaa lagu yiri qoraal ay baahisay madaxtooyada.
Madaxweynuhu waxa uu tacsi u diray ehelada iyo qaraabada dadkii walaalaha ahaa ee ku geeriyooday dirirtan, waxa uuna dadka ku dhaawacmay Alle uga beryey in uu degdeg ugu boogo-dhayo.
"Dirirtan aan ku saleysanayn qiimaha ee dhexmaraysa dadka walaalaha ah waa in si degdeg ah loo joojiyaa. Qarnigan in uu u daato dadkeenna dhiiggoodu daaqsin iyo waraab dartood, iyadoo dhulkeennu uu intaas baaxad la egyahay, waa arrin aanu qaadan karin damiirka fayow... waxa uu xasuusinayaa dadka deegaanka Ceel-Afweyn xigtanimada, xiriirka iyo xididda qotada dheer ee ka dhaxeeya, sidoo kalena in lagu jiro bilihii barkaysnaa ee diinta Islaamku ay siisay xurmada gaarka ah." ayuu ku daray qoraalka.